The Most Saffarada Tareen dalkinii Switzerland In Summer | Save A tareenka
Home > safarka Europe > The Most Saffarada Tareen dalkinii Switzerland In Summer
Waxaa la sheegay in laga yaabo in Switzerland waxaa ugu fiican u yaqaan for ay danbow baraf iyo shukulaatada delicious, laakiin waxaa jira wax badan oo dheeraad ah si dalka u qurux badan oo la kulmay isha. Saffarada tareenka ee Switzerland ayaa ka mid ah hababka ugu fiican ee ku raaxaystaan baadiyaha qurux badan. Samee ugu waqtiga aad halkaas ku qaatay. The cimilada diiran dhigaya safarka xitaa more xiiso leh. Kuwani waa qaar ka mid ah ugu Saffarada Tareen dalkinii Switzerland ee Summer.
Sitoos Express u dhexeeya St. Moritz iyo Zermatt waa mid ka mid ah Saffarada tareenka ee Switzerland
Tani waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee loo yaqaan oo ka mid ah tareenada Swiss muuqaal dabiici ah iyo sabab wanaagsan. tareenka safaradiisa dhexeeya St. Moritz iyo Zermatt via CHUR, Andermatt, iyo Brig. Waa safar buuxa maalintii tareen laakiin dad badan doortaan in ay qaban doono labada maalmood ee. markii qaar ka mid ah waxay qaataan ugu kala duwan meelaha jidka. Summer waa mid ka mid ah jeer ugu caansan si ay u tagaan oo kor u jira ilaa afar safarada ah maalin kasta muddo this. ugu The qayb muuqaal dabiici ah of this safarka tareenka waa qaybta u dhexeeya CHUR iyo St. Moritz. Halkan waxa aad ka taliya inta badan-sawiro u safri doona Landwasser Viaduct in uu dhammaanayo a tunnel.
Line Golden Pass si ay Geneva
No Saffarada tareenka ee Switzerland noqon lahaa dhamaystiran oo aan masaafo on the Golden Pass Line. Tareenka ayaa u dhaco ka soo Lake Luzern in Geneva ama ka Zurich in Geneva yaa ugu Sugan kuwa waqti yar on gacmahooda. safar kasta waa sida cajiib ah sida tan kale. Waxaa jira views ee sideed ka mid ah Switzerland ee harooyinka iyo buluug weyn, in ka badan saddex baas oo buurta iyo inta u dhaxaysa labada gobol luqadda (Faransiiska iyo Switzerland hadlayay-Jarmal). Qaadashada safarka oo dhan u baahan bedesheen tareenada dhowr jeer laakiin indhaha u yihiin iyo sidoo kale u qalantaa. Rakaabka u baahan tahay inaad ay kursiga leenahay on qaar ka mid ah tareenada iyo baabuur. U hubso in aad ka hor qorsheeyo safarka this!
Luzern in Tareenadu Geneva
Inkasta oo waxaa laga yaabaa in xilliga Xagaaga ee Switzerland oo aad loo xidho si ay u arkaan kuwa danbow cad caanka ah sannadka oo dhan oo buuraha haddii baraf tahay waxa aad rabto in aad ka badan saldhigga Jungfraujoch waa meel aad u baahan tahay in ay booqdaan. Tani waa tan sarreysa station in Europe oo waxaa lagu tagi karaa qaadaan tareen ka Kleine Scheidegg. views ka safarada tareenka ee Switzerland ay yihiin wax gaar ah iyo safarka si aad u hesho waxaa jira ugu fiican dhisayo ilaa Poland ee grand. safarka Tani waxay xaqiiqdii waa mid ka mid ah ku darto liiska.
Waxaa jira safarada badan tareen cajiib ah in ay qaataan balse waa mid Saffarada tareenka ugu muuqaal dabiici sare ee Switzerland ee Xagaaga soo socda. Maxaa ka fiican in raaxaysan qorraxda oo waxay qaadan in yaabka leh ee dalkan quruxda badan tareen? Waxaan aan ka fikiri karaa hab ka kaamilsan, si ay u arkaan Switzerland si qaar ka mid ah lacagta badbaadiyo iyo safarka tareenka.
Tayaasha tigidhada tareenka ee socdaalka Yurub? Waa maxay sababta aan qaadan 3 daqiiqo on our site in la helo safarada tareenka ugu jaban ee Switzerland ee socdaalladii tareenka aad. Soo gal goobta hadda buug tababar tikidhada.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog on your site, ka dibna riix halkan: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/the-most-scenic-train-trips-in-switzerland-in-summer/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
SwissAlps tareen safarka safarka tareenka travelswitzerland